Xaqiiqda dhabta ah - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
xaqiiqada Virtual teknolojiyaddu waxay u abuurtaa waayo-aragnimo nuugaysa isticmaale kasta oo ka dhigaysa inay garwaaqsadaan inay la falgalaan deegaankooda dhijitaalka ah ee dhabta ah iyo sidoo kale inay abuuraan jilitaanno nolosha dhabta ah. Si aad u noqoto mid aad u jilicsan, xaqiiqada dalwaddii wuxuu u abuuraa isticmaaleyaasha adduun dalwad leh laakiin waxaa loo qaabeeyey si ay u adag tahay in la sheego farqiga u dhexeeya adduunka dhabta ah iyo kan dalwaddu. Kombiyuutar la abuuray, jilitaan macmal ah ama madadaalo oo ka mid ah xaaladaha nolosha dhabta ah waa maxay xaqiiqada dalwaddii waa. Aragtida iyo maqalka isticmaalaha ayaa ugu horrayn la moodaa, iyaga oo lagu dhex gelinayaa adduun gebi ahaanba ka duwan.
Sida aagga dagaalka, gurigaagu wuxuu u beddelmi doonaa goob dagaal oo leh jawi 3D halkaas oo aad ku dhex wareegi doonto, dhex geli doonto oo aad la falgeli doonto caawinta qalabka qalabka gaarka ah. Si loo waayo-aragnimada VR, qofku wuxuu u baahan yahay madax-madaxeedka VR iyo abka VR, kaas oo sameeya labadaba qalabka iyo kuwa software waayo. Qalabka madaxa ee VR wuxuu ku habboon yahay indhahaaga iyo madaxaaga, wuxuuna muuqaal ahaan kaa goynayaa booska jirka ee aad ku jirto. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad la kulanto xaqiiqo ka duwan jawiga kombayutarka. VR-da waxaad si toos ah ugu safri kartaa Louvre, waxaad ku socon kartaa Grand Canyon, oo waxaad dhex geli kartaa ciyaarta fiidyaha adigoon ka tagin sariirtaada. Waa mid aad u soo jiidasho leh, sidaas darteed waxaa loo tixgelinayaa waxa soo socda ee weyn ee warshadaha tignoolajiyada. Qaybta madadaalada, laga bilaabo filimada ay sameeyeen Hollywood ilaa khibradaha masraxa iyo riwaayadaha tooska ah, VR waxay noqotay meel lagu daawado warbaahinta kugu xeeran. Si loo qabto sheekooyinkan VR, kamarado iyo qalab cusub ayaa la dhisay oo tiradu weligeedba way sii kordheysaa soo gelinta iyo baahinta tooska ah. Mar dhow waayo-aragnimadani waxay u ekaan kartaa xaqiiqo oo ma aha filim mar dambe. Qaybta ciyaaraha sida iska cad waa meesha ugu awooda badan ee VR taasoo siinaysa naqshadeeyayaasha xoriyada inay ciyaaraha ku qaataan meelo cusub oo cajiib ah oo ay ku bedelaan maandooriyeyaasha joysticks iyo badhamada caadiga ah iyagoo leh awood ay wax ku taabtaan oo ay ku gaadhaan. Nakhshadeynta ayaa sidoo kale ku noqotay mid aad u fudud VR halkaasoo naqshadeeyayaashu ay isticmaali karaan qalabka farsamada si ay u dhistaan ​​guri dhab ah ama design baabuur iyo qaybaha kale ee baabuurta sida ay dhab ahaantii ahaayeen. Koontaroolayaasha Wand-u eg iyo abka ayaa durbaba VR ka dhigaya garoon ciyaareed la yaab leh oo goor dhow kuwani waxay muhiim u noqon doonaan dhammaan shaqada naqshadeynta. xaqiiqada Virtual waa mid aad u mashquulsan in hantida maguurtada qaybta, xitaa meel ka fog mayl, mid ayaa si sahlan u dul socon kara guriga ay rabaan inay u muuqdaan inay hore u joogeen ama ku habboon yihiin alaabta guriga aad jeceshahay si aad u aragto sida ay u ekaan doonto. Kuwani dhammaantood waxay ku suurtoobi lahaayeen VR. waxay u oggolaan doontaa isticmaaleyaasheeda inay ku soo galaan dukaan dhar -gal ah oo leh noocyo aan dhammaad lahayn iyo ikhtiyaarro ay isku dayaan isla goobta. Hadda ka feker fuulitaanka Mt.Everest intaad guriga fadhido ama booqato meelaha caanka ah ama xitaa ku qabsato xusuustaada kamarad 360-digrii ah. VR wuxuu u qaabayn karaa adduunka qaab aad u muuqda, kimistariga, daawada, cilmiga xiddigiska ama fiisikiska, jilitaankeedu wuxuu bixin karaa naqshado, farsamooyin, iyo fikrado dhinac kasta ah.
Wax kasta oo aad qaali u ah, khatar ah ama aan macquul ahayn dhab ahaan, xaqiiqada dalwaddii waa jawaabta. xaqiiqada Virtual Waxay noo ogolaataa inaan qaadno khataro toos ah si aan u waajahno dunida dhabta ah, laga bilaabo dhakhaatiirta qalliinka ee goobta caafimaadka ilaa duuliyayaasha dagaalka tababarayaasha, VR waxay helaysaa guud ahaan. VR waxaa lagu hirgelin karaa nooc kasta oo warbaahin ah ha ahaato muuqaalo ama filimaan laakiin taasi waxay ku suurtogeli kartaa oo keliya qalabka VR sida muraayadaha iyo dhegaha-madaxaha ay soo saaraan shirkadaha sida OnePlus, Samsung iyo Oculus Rift. The xaqiiqada Virtual hadda kuma koobna oo keliya isku-xidhka bulshada iyo ciyaaraha fiidyaha ee loo horumariyay jawi muuqaal ah laakiin leh baaxad ballaadhan. xaqiiqada Virtual adeegsada tiro badan oo tignoolajiyada ah si ay u gaadho yoolkeeda ah bixinta jawi macmal ah oo leh jawaabaha ku haboon wakhtiga dhabta ah tanina waa farsamo ahaan farsamo adag oo ay tahay in lagu xisaabtamo garashadayada iyo garashadayada. xaqiiqada Virtual iyo xaqiiqda la kordhiyay, haddii la wada shaqeeyo, waxay si dhab ah u beddeli kartaa habka aan wax u aragno oo aan ula xiriirno adduunka iyo waxyaabo kale.